Warshadaha Shiinaha Wejiga Wejiga / daahyada Glass Wall Glass iyo soosaarayaasha | Yongyu
Darbiyada daahyada muraayadaha-ka-kaamil-ka-dhigma iyo wajiyada
Maxaad aragtaa markaad ka baxdo oo aad hareereyso? Dhismooyin dhaadheer! Iyagu way ku kala firidhsan yihiin meel kasta, oo waxa jira wax iyaga ka neefsanaya. Muuqaalkooda la yaabka leh waxaa lagu buuxiyaa darbiyada muraayadaha daahyada ah kuwaas oo ku darida taabasho xasaasi ah muuqaalkooda casriga ah. Tani waa waxa aan annaga Yongyu Glass ku dadaalno inaan ku bixinno qayb kasta oo ka mid ah alaabadayada.
Wejigayaga muraayadda iyo darbiyada daahyada ah waxay ku yimaadaan qaab ballaadhan oo xulashooyin dhumuc leh. Waxay yareeyaan isbeddelada waxayna noloshaada ama khibradaada shaqo ka dhigaan mid raaxo badan iyagoo xannibaya jidka waxyaabaha. Intaas waxaa sii dheer, waxay xaqiijinayaan hufnaanta heerkulka, waxay kaa caawineysaa inaad keydiso dhismaha kharashyada.
Dalbo wejigaaga dhalada - Waxaan ku geyn doonnaa qalliin.
Ma xoogaa cabir jumbo ah ayaad jeclaan lahayd inaad hesho? Mise waxaad u baahan tahay inuu qalqal geliyo si uu ula jaan qaado soo laabashada dalabkaaga? Maxaa nooga dhiga soo-saareyaasha muraayadda indhaha ee doorashada waa inaanu ku bixin karno ku habboon mashruuc kasta. Baadh xulkan si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sameynta, qaababka, noocyada daaha, iwm.
Nagu soo booqo markaa ka wada hadal faahfaahinta mashruucaaga oo aad xigasho hesho. Waxaan kuu xaqiijineynaa in nidaamka daahyadaada galaaska ay jiri doonaan toddobaadyo gudahood!
Hore: Jumbo / Muraayadaha Nabdoonaanta ee Quwada
Xiga: Tareenka Nabdoonaanta Glass & Deedadka
Muraayada Goolka daahyada
Cabirrada Muraayadaha Glass Daaha
Muraayadda Darbiga Muraayadda
Muraayada daahyada muraayadda
Muraayada daahyada Muraayadda En Espanol